Impatho-Herpes phezu izindebe: odokotela beluleka
Kukhona cishe ngeke noyedwa umuntu omdala emhlabeni bonke abake waphaphama ekuseni, mina ngangizwa ukuncinza ezingemnandi anamabhamuza izindebe. Lokhu herpes ukwelashwa phezu sezindebe ezivuma yinqubo hhayi okuhle. Kodwa yini ongayenza - lesi sifo ngokuvamile akuyona into emnandi. Kodwa kungenzeka ukulwa futhi sizoxoxa ngani kulesi sihloko sendlela kahle nangempumelelo ukukhiqiza ukwelashwa herpes on the izindebe.
Okokuqala, sibheka indlela herpes liyavela izindebe elibangela ngezinye izikhathi, akucacile. Iqiniso lokuthi isiguli ngasinye futhi izimpawu zabo ziyafana nzima kakhulu ukuthola. Asazi njalo recognize ukuthi izilonda abandayo sezindebeni izimbangela zazo kungaba uphawu elikhanyayo ukutheleleka umzimba, kudinga luhlolo ikakhulukazi olunzulu udokotela onguchwepheshe. Kumele baqonde ukuthi igciwane isivele ehlezi ngaphakathi, nangaphandle, uthi ngokuphila kwakhe njengomhlatshelo njalo ezingalindelekile abandayo ukwelashwa obuhlungu phezu izindebe kungenzeka ngezindlela ezahlukene. Kodwa kubalulekile ukuba ubheke okubi yangempela okushayile emzimbeni. Uma lokhu kungenjalo kwenziwa ngendlela esifike ngesikhathi, bese wena engozini ukuba sikuzuze e abangane bakhe impilo yakhe yonke.
Uma njalo livela herpes ke le ndaba amasosha omzimba obuthaka. Uma uyikhumbula, ngaphambili, lapho othile ebonakala isici amawala, lesi simanga ubizwa ngokuthi "umkhuhlane." Futhi lokhu nencazelo efanele njengoba herpes ngokuvamile livela nje lapho sigula SARS no-Ari. Kodwa sifuna ukuxwayisa kini lena kuphela kuwukusika elijikayo engabonakali futhi herpes angaba wuphawu ukuba yiziphi ezinye izifo eziyingozi kakhudlwana. Iningi worryingly, herpes ungaqala "yokuhamba" futhi ngokuzayo ezilondeni avele kwenye indawo.
I-Herpes libhekisela esigabeni izimbangela ezithathelwanayo kanye neqiniso lokuthi yokudlulisela igciwane kumuntu nomuntu. Ngokuvamile, le nqubo kwenzeka ngesikhathi angiqabule okukhulu, ngeshwa, indlela ukuvimbela le ndlela ukutheleleka kuze kube manje, imithi akanikezi. It kuphela uhlala siqaphele ukuba mbeni obuseduze nomuntu, uma ngokusobala wazi ukuthi esiphathiswa igciwane herpes.
Futhi ngisho kokuqaphela lokhu, ngokuvamile esingasoze banake ekwelapheni izilonda abandayo sezindebeni, okuyinto kungagwenywa izinyathelo ezivamile izifo. Ukuze wenze lokhu, akukho izimali ngokwanele futhi walokhu ulula. Kufanele kube emakhazeni ukuze ukugqoka ngendlela evumelana nesimo sezulu, ngaphandle kokunikeza isizathu hypothermia. akubandakanyi Ekupholiseni ngenkathi egumbini noma lapho kuhanjwa ngemoto. Okusalungiswa - abangane herpes. Futhi-ke, kudingeka ngenjongo ukubhekana imikhuba emibi ukuthi buthaka amasosha omzimba.
Kukhona amaphilisi namafutha, okuyinto kuphumelela kakhulu ekulweni le isicefe.
Ikhambi ezidume kakhulu Herpes - Zovirax wamafutha. Kuyaqapheleka njengoba ephumelela kakhulu iningi labantu bonke abake basebenzisa yona. Futhi eqinisweni, konke kuncike ngokushesha kangakanani lawo mafutha sisetshenziswa. Uma sisetshenziswa nge mnene ukunyakaza isiyingi emahoreni ambalwa okuqala, lapho umuntu eseqala ukuzwa isici evuthayo, herpes kanye akakwazi uthele. Nokho, esimweni esinjalo, uma "walala" kubalulekile smear endaweni ethintekile izikhathi eziningana, kodwa futhi umphumela omuhle akuyona eside ukulinda.
Kukhona zifana izenzo wamafutha ngokuthi Acyclovir. Libuye ngempumelelo. Ukuze ukhethe ithuluzi evumelana nawe kakhulu, udinga kudokotela.
Ochwepheshe bezokwelapha ngokuvamile linqume iziguli kungenye ikhambi herpes - amaphilisi famciclovir noma Famira. Uma une isikhathi sizibambele emthonjeni ekuqaleni lesi sifo, izilonda izindebe ukuvela. Kodwa noma kunjalo, lawo amaphilisi ukusiza ukuze silwe ukubonakaliswa yalesi sifo.
Indlela yokugwema amaphutha lapho ukhetha amafutha ngoba hemorrhoids?
Conjunctivitis Amagcikwane ezinganeni: ukwelashwa kanye nezimpawu
Ukubuyisa, izizathu kudingeka sithole ngokushesha.
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini laryngitis pharyngitis, namathansela futhi tracheitis?
9 izizathu zokuthi kungani kufanele uvakashele Monaco kulo nyaka
Umkhwenyana womkhwenyana - amasiko amadala namasiko amasha
Esitolo nokuthengisa online imikhiqizo zokuhloba
Uyini promo code ku imidlalo?
I sesisonke isampula - isampula ... Izinkomba Zesikhathi. Isampula e Ucwaningo lwezenhlalo
Izimfihlo ukudoba professional: kanjani ukubamba eyikati kusukela ogwini
Arthur: igama elisho ezikhathini ezahlukene zokuphila